Bayoinformatics Professionals Job Duty Template – JobDescriptionSample
Home / Job Description / Bayoinformatics Professionals Job Duty Template
Bayoinformatics Professionals Job Duty Template
superadmin June 18, 2016 Job Description Leave a comment 261 Views
Qalabka Job Description Template
Nidaamyada Computer Sample Falanqeeyayaal Job Duty
Samee baaritaan la isticmaalayo habab bayoinformatics oo la xiqiijiyay in meelo tusaale ahaan daroogada, teknoolajiyada caafimaad biology xisaabeed, biology proteomics . Khariidadda laga yaabaa in qaaciidooyinka wareegi ka ah baadhista iyo ka shaqeynta macluumaadka genomic, ama macluumaad dheeraad ah iyo organic liiska.
Ka dhig taliska ee instrumentation, biochemistries cusub, ama software by dhigata heshiisyada in ay yihiin xirfad iyo baadhaya qalab caafimaad.
Sii record iyo alaabtii xisaabeed for raad bayoloji-ku saleysan sida tusaale ahaan falanqaynta kala dhaxlo, rating ah hiddo-qowlka, iyo niyo function hiddo.
Ku toosi shaqo ee shaqaalaha farsamada macluumaadka fulinta iyo xirfadlayaasha bayoinformatics ujeedooyin ama qalabka meelaha sida tusaale ahaan bayoinformatics in uu yahay caafimaadka, transcriptomics, metabolomics, iyo proteomics.
Soo saaridda barnaamijyada computer cusub ama Customize software jooga si ay u qanciso shuruudaha hawsha caafimaad oo gaar ah.
Abuur naqshado xogta iyo liiska.
Abuuri karo ama beddesho hababka bayoinformatics web ku salaysan.
Style oo isticmaali algorithms bayoinformatics ay ka mid yihiin waxbarashada mashiinka kormeer la'aan iyo socdo, horumarinta firfircoon, ama algorithms garaafyada.
Abuuri karo siyaabo xisaabeed cusub iyo hababka nidaamsan as-baahan yahay diirada cilmi.
Soo ururinta info in loo isticmaalo in falalka tusaale ahaan bayoinformatics in uu yahay dhismaha iyo hiddo-qowlka muuqaalka.
faa'iidooyinka cilmi faqa dhex buugaagta caafimaadka, bandhigyo heshiiska, ama warar ballanqaad.
Qaabeeyaan si ballaaran la heli karo, ganacsi liiska -genomic proteomic.
Ka hubi falanqeeyayaasha u baadha arrimaha, soo jeedin teknoolajiyada-xuddun u jawaabo, ama la dhiso farsamooyinka in ay yihiin xisaabeed.
Falanqeeyaan adkayd weyn sida tusaale ahaan xogta taxane genomic xogta dabiiciga ah, iyo macluumaadka xogta ku saabsan hawlaha cilmi-caafimaad oo aasaasi ah ama.
Talinaynaa hawlaha si kor loogu qaado.
talo ka raadso qaybaha sida tusaale ahaan kor u qaadida, horumarinta ganacsiga, iyo hawlaha waafajinta horumarinta wax soo saarka ama horumarka.
Shaqeeyaan isticmaalaya barnaamijyo software in isbedel iyo horumarka ee dhinaca bayoinformatics software in uu yahay ganacsi.
Imtixaanka bayoinformatics khayraadka iyo codsi cusub iyo.
Samee tirooyinka kooban xaqiiqooyinka ku saabsan dadka genomes.
U sheeg dadka kale gudahood Kumaan iyo isticmaasho qalabka in ay yihiin dhinaca bayoinformatics.
Kordhi interfaces shaqsi si bayoinformatics software iyo liiska.
Raad Ayuub u Baahan
Akhrinta khadadka fahamka-fahmidda iyo cutubyada diyaar in dukumentiyada la xiriira shaqada.
Active-Dhageeysi-Siinta wacyiga oo dhan waxa ay dadka kale ayaa hadda leh, waqti qaadashada si aad u fahamto waxyaabaha la abuuray, weeydiin su'aalo sida ku haboon, oo aan ku cabirayaan at dhacdo in ay yihiin aan habboonayn.
Daabacaadda-hadalka si guul ah oo qoraal ah ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha dhagaystayaasha.
Ka hadalka-hadalka dadka kale macluumaadka effortlessly wadaagaan.
xal Research-Isticmaalka iyo xeerar cilmi ah si uu u xaliyo arimaha.
Halis-ka fakaraya-Isticmaalka sababta oo u malaynaya inuu aqoonsado awooda iyo khasaaraha of hababka, gunaanad ama xal kale oo ay dhibaatooyin ka.
Active-Learning-ogyahay saamaynta macluumaadka cusub labada go'aan qaadashada xalinta dhibaatooyinka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka iyo.
Barashada Qaababka-qaadaaya oo codsanaya baridda / hababka waxbarasho iyo hababka saxda ah ee dhibaatada marka barashada ama wax tababarka ku jira oo cusub.
Hubinta-TrackingPEREvaluating oolnimada naftaada, oo qof oo ka duwan yihiin, ama shirkadaha qaado talaabo sixid ah ama in ay curiyaan horumar.
Social Perceptiveness-ka foojignaatid jawaabaha othersA iyo fahamka sababta ay uga jawaabaan halka ay sameeyaan.
dadka kale qancinta-oolka ah inay wax ka beddelaan ama maskaxdooda.
Gorgortanka-Keenida dadka kale si wadajir ah oo dooneysa in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
dadka kale, Taakulada-bara sida kaliya inay u dhaqaaqdo.
Orientation-firfircoon Company doonaya habab si ay u caawiyaan shakhsiyaadka.
Advanced dhibaato xalinta-Kala dhibaatooyin adag iyo cilmi baarista xogta la xiriira hirgeliyaan doorasho iyo si ay u horumariyaan iyo qiimeeyo doorashada.
Ganacsi Qiimeynta-baarista waxay u baahan tahay, iyo baayacmushtariga u baahan yahay in la sameeyo design a.
qalabka ama dhalin iyo tiknoolaji si ay u shaqeeyaan qofka u baahan Engineering Design-qabsashada.
Gear Selection-Go'aansiga nooca qalab iyo qalabka loo baahan yahay in shuqul samayn.
Barnaamijyada wajigeeda-darista, alaabta, fiilooyin, ama qalabka si ay u qanciso caddaymaha.
Sireed-curinta codsiyada computer codsiyada kala duwan.
Hawlgallada Monitoring-Galitaanka calaamadaha dheeraad ah, burooyinkoodii, ama tusayaasha si loo hubiyo in ay jirto qalabka hadda si sax ah oo ka hawlgala.
hawlaha qalabka ama farsamooyinka Habka iyo Control-hortagidda.
Qalabka Dayactirka-Sameynta qarashka xannaaneynta in uu yahay joogtada ah ee qalabka iyo go'aan marka.
Dhib-Go'aaminta arrimaha ka dambeeya kala carar in ay yihiin maaraynta iyo xulashada sidii loo sii wadi ku saabsan.
lagu daydo ama farsamooyinka la isticmaalayo habab muhiim ah hagaajinta-hagaajinta.
kormeerka iyo qiimeynta badeecadaha Quality Control-Research-Bandhigyada, adeegyada, ama nidaamyada si ay u xukumaan waxtarka ama tayada.
Xigmad iyo go'aan-qaadasho-Qaadashada tixgelin kharashka guud iyo faa'iidooyinka falalka iman kara si aad u hesho mid ka mid ah ugu habboon.
Falanqaynta-Go'aaminta waxa sort of barnaamijka waa in ka shaqeeyaan iyo sida hagaajinta deegaanka, hawlaha, iyo sidoo kale xaaladaha saameyn ku yeelan karaa gargaarka.
Hababka Qiimeynta-Aqoonsiga tallaabooyinka ama tilmaamayaasha waxqabadka iyo sidoo kale tallaabooyinka lahaa baahan yahay in la hagaajiyo ama qaab sax ah, qaraabo u gool ee qalabka.
Time-Management-Xakamaynta la joogo dad kale oo ka mid ah ayaa muddo u gaar ah.
Kormeerka Savings-Go'aaminta sida dakhliga ugu dhakhsaha badan lagu bixin doonaa si aad u hesho shaqada dhammeeyo, iyo xisaabiyenimo kharashyada kuwan.
Management of Waxyaabaha Ilo-Fahmida iyo helitaanka in isticmaalka habboon ee muuqaalada, qalab, iyo qalabka loo baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Kormeerka of Workers Resources-Building, dhiirigelinta, oo hagaya dadka waawayn, sababtoo ah waxay u shaqeeyaan, go'aaminta dadka aad ugu wanaagsan ee Shuqulkiinnu.
Shuruudaha tababarka Shuruudaha Experience
Career Skills Control Shuruudaha
dheganaanta – 90.20%
Arrinta ku saabsan Kuwo kale – 78.96%
Direction Bulshada – 78.95%
gaynta cadaadis – 84.11%
runsheegnimada – 92.37%
Fiiro gaar ah u Details – 91.72%
xoog – 89.80%
Horumarin – 92.97%
Adoo ka fakaraya Analytical – 97.00%
Online Ganacsatada Work Duty Template
Execute store pursuits of companies working solely online. Might conduct duties such as for example …